Tele RELAY တစ်ခု - လူးဝစ် Enrique Xana ကင်ဆာဖြင့်သေ9နှစ်ပေါင်းသမီးကိုအျောဟစျ "သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုလမ်းညွှန်သောကြယ်ပွင့်ဖြစ်လိမ့်မည်"
မူလစာမျက်နှာ » Autres "လူးဝစ် Enrique Xana ကင်ဆာဖြင့်သေ9နှစ်ပေါင်းသမီးကိုအျောဟစျ" သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုလမ်းညွှန်သောကြယ်ပွင့်ဖြစ်လိမ့်မည် "
လူးဝစ် Enrique Xana ကင်ဆာဖြင့်သေ9နှစ်ပေါင်းသမီးကိုအျောဟစျ "သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုလမ်းညွှန်သောကြယ်ပွင့်ဖြစ်လိမ့်မည်"
လူးဝစ် Enrique ဟောင်းတစ်ဦးစပိန်ဘောလုံးကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သူသည်ဘာစီလိုနာ၏နည်းပြကြီးနှင့်ဇူလိုင်လ 2018, စပိန်အမျိုးသားရေးအသင်း၏နည်းပြ။ ဒီ post ကိုသူမိသားစုအကြောင်းပြချက်နှင့်အင်အား majeure ကိုးကားပြီးဆယ်တလအကြာမှာထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
အဲဒီမှာ Visca el ဘာစီလိုနာ visca Catalunya! pic.twitter.com/9BwBiH2sAK
- လူးဝစ် Enrique (@LUISENRIQUE21) မေလ 27, 2017
ဘာစီလိုနာနှင့် Catalonia အလည်အပတ်ခရီးသွားရောက်ကြည့်ရှု!
လူးဝစ် Enrique ၏သမီးကင်ဆာရောဂါကွယ်လွန်
အဆိုပါ 29 သြဂုတ်လလူး Enrique သူ၏သမီး Xana ကင်ဆာဆန့်ကျင်သည်သူ၏စစ်တိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း, ကြေငြာချက်သည်သူ၏အသက်တာ၏အများဆုံးလိမ်ဖဲ့ခြင်းတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကို9နှစ်အရွယ်သမီး Xana အဆိုပါသွားတာက de သားအပြီးတွင်လူး Enrique, သူ့မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။ RIP 💙 pic.twitter.com/5NVheav7UJ
- အပြာရောင် (@TheBlues___) သြဂုတ်လ 30, 2019
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုသူမရဲ့သမီး Xana ၏အသေခံပြီးနောက်လူးဝစ် Enrique, သူ့မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ9နှစ်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ RIP 💙
Xana Enrique သာ9နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ လူးဝစ်သူ၏သမီး osteosarcoma ၏5လ, အရိုးကင်ဆာ၏ပုံစံကနေခံစားခဲ့ရကြောင်း, မိမိကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာသူမကရောဂါကျော်လွှားနိုင်ဘူး။
- လူးဝစ် Enrique (@LUISENRIQUE21) သြဂုတ်လ 29, 2019
သငျသညျအလွန်လွဲချော်ပါလိမ့်မည်, သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့တနေ့ကျနော်တို့ပြန်တွေ့ကြလိမ့်မည်မျှော်လင့်ကြောင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအောက်မေ့ပါမည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏မိသားစုလမ်းညွှန်သောကြယ်ပွင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ဝမ်းနည်းသင်ကဆိဆုံးရှုံးအသက်တာ၌အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်။ သူ RIP နည်းနည်းထောင့်မှတဆင့်သွားပါလိမ့်မည်အဘယ်သို့ထင် cant ။ သင်ဤတိုင်ကြားစာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်
- မိုဟာမက် Kamran (@guners4life) သြဂုတ်လ 30, 2019
သူမ၏ကလေးသည်ဆုံးရှုံးဖို့ဒါဝမ်းနည်းအသက်တာ၌အကြီးမြတ်ဆုံးအရှုံးဖြစ်ပါတယ်။ ငါသူမှတဆင့်သွားဘယ်အရာကိုစိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးနည်းနည်းကောင်းကင်တမန်သည်ငြိမ်ဝပ်စွာ။ ငါသည်သင်တို့ကိုဒီဝမ်းနည်းခြင်းကျော်လွှားကြလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်
ငါ့သမီးကိုငါ့ရှေ့မှာသေဆုံးသွားပါလျှင်ကျွန်မအစဉ်အဆက်အများဆုံးမိဘများနှင့်တူပါကကျော်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။ Little ကအိန်ဂျယ် rip
- skyblueloyalist (@skyblueloyalist) သြဂုတ်လ 30, 2019
ငါ့သမီးကိုငါ့ရှေ့မှာအသေခံသည်မှန်လျှင်, ငါအရှိဆုံးမိဘများကဲ့သို့ဆိုင်းငံ့မယ်လို့ထင်ကြပါဘူး။ Little ကအိန်ဂျယ် rip
ဤရွေ့ကား, ငါ့နှလုံးကသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့အားမေတ္တာ, ပွေ့ဖက် & ဆုတောငျးခကျြစာရေးပေးပို့ခြင်း, & သူ့မိသားစု _him_ ဒါဝမ်းနည်းထွက်ဝင်သည်သူမသည်💝😞🙏🏻😘💝လှပတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့သည်။ xxx
- Elaine Clarke (@Elaine_clarke) သြဂုတ်လ 30, 2019
ဒါဟာငါ့နှလုံးသူ့ကိုနှင့်သူ၏မိသားစုနှင့်အတူဖြစ်တယ်, ဒါဝမ်းနည်းရဲ့ရှိသမျှတို့ကိုငါသူတို့ကိုမေတ္တာ, ပဌနာနှင့်ပွေ့ဖက်အပြည့်အဝပေးပို့ပါက💝😞🙏🙏🏻😘💝လှပသောကလေးမလေးဖြစ်ခဲ့သည်။ XXXX
Oh! တကယ်ပဲဝမ်းနည်း။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သူမ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကြွင်းသောအရာပါစေသော။
- ဂျယ်ရီ Olowo (@jerry_yinka) သြဂုတ်လ 30, 2019
Oh! တကယ်ပဲဝမ်းနည်း။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအရာကြွင်းသမျှစေသော။
ငယ်ရွယ်ရွယ်ဝမ်းနည်းဖွယ်သတင်း, ငါတို့ရှိသမျှသည်အလွန်လူမျိုးစု Concern ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသင်း, ငါလူနှင့်သူ၏မိသားစု Rip အနည်းငယ်သာတဦးတည်းကတဆင့်သွားကြသည်ဒါကနာကျင်မှုစိတ်ကူးမရပါဘူးရည်မှန်းချက်အရ
- ရောဘတ်မိုက်ကယ် Davis က (@RobertM51726029) သြဂုတ်လ 30, 2019
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့သည်သက်ဆိုင်ရာအခါငါတို့ရှိသမျှသည်အလွန်လူမျိုးစုဖြစ်လာပေမယ့်ကျနော်မှတဆင့်နာကျင်မှုကြောင့်လူနှင့်သူ၏မိသားစုစိတ်ကူးမပေးနိုငျသညျ, အခြားဆိုးဆိုးရွားရွားဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ နည်းနည်း rip
ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များနှင့်ဆုတောင်းများဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ကလူး Enrique ၏မိသားစုနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။
ဂရန်းအမျိုးသားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး: ငါ့ကို Akere Muna အားလုံးဆွေးနွေးမှုများရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်ထုတ်လွှင့်နေကြသည်အဆိုတင်သွင်း
ကင်မရွန်း: အနောက်တိုင်းအထက်တန်းလွှာနိုင်ငံတော်သမ္မတ Biya ၏ပဏာမခြေလှမ်းကြိုဆိုပါတယ်